(၅၁).....အမေ့ နောက်ကျော .....ဓားနဲ့ထိုးနေပြီလား.......
PAW PAW (နည်းနည်းလေး တော့လွဲနေတယ်)
ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့......ပြည်သူ့အစိုးရကြီး......ပြည်သူတွေ မျှော်လင့် တာတွေနဲ့ .သွေ ဖယ်နေ ပြီလား.......ပြည်သူတွေစားဝတ်နေေ၇း .......အတွက်အလုပ်အကိုင်အသစ်တွေ ဖော်ဆောင် မပေး နိုင်ဘဲ ..... လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေတောင်.....လုပ်စားဖို့ ခက်ခဲအောင် .....လုပ်ခဲ့တာလား ..... .ဈေး ကွက်စီး ပွားရေး ကို တကယ် ဖော်ဆောင်နေတာ ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လား .......ဆိုတာနဲ့ ...... ပါတ် သက်ပြီး PAW PAW တို့ ...... လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ပြီး ပွားကြတာပေါ့....... ရန်ကုန် သားဘော်ဒါကြီးက ...... .ပြည်သူ့အစိုးရ တက် လာပြီး ...... တစ်လ မပြည့်သေးဘူး.....သင်္ကြန်မှာစီးပွာရေး မဏ္ဌပ် မလုပ် ရဘူး...... .သင်္ကြန်ကို စိတ်နာတဲ့ အခံရှိတာလား ...... သူ များတွေေ ပျာ် တာ မနာလိုစိတ် အခံရှိတာလား.......လုံခြုံေ၇း အကြောင်းပြ ချက်ကြောင့်လားမသိ...... မလုပ်ရဘူး ဆိုတာ ကျည်း ပဲ ....သူမသိတာက ဒီသင်္ကြန်ကို မှီပြီး ....... လက်သမားတွေ၊ရေပိုက်သမားတွေ၊ မီးသွယ်သမားတွေ၊ ဈေးရောင်းစားကြတဲ့ ......လူတန်းစားတွေ၊ အဆိုတော်တွေ၊အနုပညာရှင်တွေ ငွေရေးကြေးရေး.....အတွက်ဘယ်လောက်လည်ပတ်မှု ရှိ တယ် ဆိုတာ မသိတာပဲ.....အလုပ်အကိုင် သစ်တွေဖန်တီးမပေးနိုင်ဘဲ.... .၇ှိပြီးသား အလုပ်၊အကိုင် တွေလိုက် ဖျက်နေတာ ပြည်သူ အားကိုးစရာလားတဲ့................................................... ကွမ်းအမြဲဝါးတဲ့.....ဘော်ဒါ တက္ကစီမောင်းကြီးကတော့.........သူတို့အာဏာရပြီးသိပ်မကြာပါဘူး.......ကွမ်းစားတဲ့ပြသာနာ ....လာ ပါလေေ၇ာ...... ဒီကွမ်း ကလည်း တစ်နိုင်ငံ လုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေတာကို သတိ မမူဘဲ...... ငါ့စကားနွား ရပြောလေတော့ .....ကွမ်းနဲ့ စီးပွားရှာသူတွေ မေတ္တာ ပို့ကြပါလေရော............နောက်ဘော်ဒါ တစ်ယောက် ကတော့......ညဈေးလည်း ဘာထူးလဲကွာ......စီးပွားပျက်သူတွေ၊ဒုက္ခရောက်ရသူတွေ ရှိကြတာပါပဲ ကွာ ဆိုပဲ..... .....နောက် တစ်ယောက် ကတော့.... TAXI တွေလဲဘာလုပ်မယ်၊ညာလုပ်မယ် လေသံပေးလို့ပေး ...... ဘာတွေ လဲကွာ......အလုပ်အကိုင်အသစ်၊အသစ်တွေ ဖန်တီးပေးစမ်းပါ ရှိပြီးသားတွေ လိုက် ဖျက်နေ သလို ခံစားရ တယ်ဆိုပဲ..... .................. ............ ......... ........ .ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်တဲ့ ဘော်ဒါကြီးကတော့.......ဒို့လောကလည်း.......အထပ်မြင့်တွေ စိ စစ် ရင်လည်းကြော်ငြာပြီး......ACTION မြန်မြန်ယူ.....ဘယ်လို သတ်မှတ်မလဲ ၊တစ်လအတွင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာကို .....ပြစ်ချထားတော့ ......လုပ်ငန်းတွေ အကုန်ရပ်ကုန်ပြီး.......လေဘာတွေ ပါ ပြသာနာတက် ကုန်တော့တာပေါ့.....ဆုံးရှုံးမှုက တော်တော်များခဲ့ပါတယ်ကွာဆိုပဲ......................နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ...ဟောခုလည်း ......လမ်းတွေ ပိတ်တာ အကြောင်းပြပြီး .....ဘုရင့်နောင် ပွဲရုံတန်းကို စစ်တပ် နဲ့ တိုက်ပေးနေ ပြန်ပြီ.......လမ်းပိတ်တာ .....မီးပွိုင့်တွေ ဗဟို တိန်းချုပ်စံနစ် တစ်မြို့လုံး..... အသက်ဝင်မှာကို ခဏစောင့် ပြီး ......ပွိုင့်က လဒတွေ မထား ၇င် လမ်းတွေပိတ်တာ.......သက်သာမှာ ......ယာဉ်ထိန်းတွေ လျှော့ပြီး......လမ်းကြောင်းပွိုင့်တွေ အတွက်ပဲ......ဆိုင်ကယ်သမားတွေသုံးပြီး...... ပွိုင့်ကသူတွေကို ရဲတပ်ရင်း ပြန်ပို့ရင် လမ်းကြောရှင်းမှာ............... ဘုရင့်နောင်ဝင်တဲ့ ကားတွေ ညပိုင်းပဲပေးဝင်ပေးထွက်ရင် အိုကေ လောက်မှာ .......ဒါတွေကိုစဉ်းစာပြီးမလုပ်ပဲ...... ဟိုလုပ်မယ်၊ဒီလုပ်မယ် လေသံကြောင့်. .....ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက်လာရင် ဘယ်သူ တာဝန်ယူ အဆဲခံရမှာလည်း.........နောက်ဆုံး လက်သန်းတွေက ငါတို့တော့ မှားပါပြီ.......ဆိုပြီး နောင်တတွေ တနေရအောင်..........လေသံတွေ နဲ့ ဒုက္ခ အမြဲပေးနေတဲ့ ရွှီးဖြိုးကြီး......ပြည်သူ့ အစိုးရကို......အမေ့ကို .....နောက်ကျော ဓါးနဲ့ ထိုးတော့ မယ်ထင် တယ်ဗျို့......(ဒုတိက အရေးကြီးဆုံး.....စီးပွားရေး မြို့တော်ကြီးကို ....တာဝန်ယူထားသူ တစ်ယောက်ရဲ့...... ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ အတွက် ......တိုင်းဒေသကြီး..အကြံပေးအဖွဲ့ ထားပေးသင့်ပြီ.......စကားတွေ ကို သင်္ကြန်အမြောက် မထွက်ဖို့ ထိန်းသင့်နေပြီ ..... ) ...
အစား အစာနဲ့ ကျန်းမာေ၇း ...ဘယ်လောက် ဆက်နွယ်နေ သလဲဆိုတော့ ခုနောက်ပိုင်း အသက် အ၇ွယ် ငယ်ငယ်လေး တွေ နဲ့...... နှေ့မြင် ညပျောက် အသံတွေ ပိုပို ကြားလာနေ ၇တယ်.......မြန်မာပြည်ကြီးက ပြည်သူတွေက ခေတ်မှီ လာတာ နဲ့ အမျှ .....လူ့သက်တမ်းက ပိုပြီး တိုကုန် ပါေ၇ာလား...... ဂျ ပန်လို နိုင်ငံ နဲ့တော့ တကယ့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာ PAW PAW တို့အဖြေထုတ် ကြည့် ကြတာပေါ့....
....အဲဘော်ဒါ တစ်ယောက်က သူအားနေတာ နဲ့ ..... ဓါတု ဗေဒဌာနက ဖွင့်တဲ့ စားသောက်ကုန် အခြေခံ သင်တန်း သွားတက်တုန်းက.... ဆ၇ာ ၊ ဆ၇ာမ တွေ ပြောပြ ၊ သင်ပြ တာကို ဖောက်သယ်ချ တာကတော့ ဒီလိုတဲ့......ခု လူတွေ အလွယ် စားနေကြတဲ့ အသင့်စား ခေါက်ဆွဲခြောက် ထုပ်တွေ ဟာ ......ဒီအတိုင်း စားလို့ လုံးဝ မသင့်တော်ဘူး ဆိုပဲ......အထုပ်မှာေ၇းထားတဲ့အတိုင်း...... ပွက်ပွက်ဆူ နေတဲ့ေ၇ထဲမှာ ( ၅ ) မိနစ် ကနေ ( ၁၀ ) မိနစ်လောက် ကြာအောင် ထားပြီးမှ စားသုံး ၇မှာကို ......ဒီ အတိုင်း ၀ါးစားဖို့ ကလေးတွေကို မိဘတွေ ...... ပေးပြီး စားခိုင်း နေကြတာတွေ ၊ တွေ့ တွေ့ နေ၇တယ်တဲ့.....ဒါဟာလုံးဝ မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပဲ .......ဒီခေါက်ဆွဲခြောက် ထုပ် တွေဟာ ကြာ၇ှည်ခံအောင် ဓါတု ပစ္စည်…
စာစောင် အဟောင်းလေး ပျင်းပျင်း နဲ. ဖတ်မိတာက.....12 july 2012 ၇က်နေ.ထုတ် venus naws ၇ဲ့ ကလောင် ၇ှင်.... ခင်နှင်းကြည်သာ ၇ဲ. စောင်းပါးလေးပေါ့ .....သူက မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်.တန်ဆာ တစ် ယောက် အကြောင်းကို interview သဘော ချပြသွားတာက ဒီလို..........လမ်းပေါ်မှာ ဧည်.သည် ၇ှာ၇သော ပြည်.တန်ဆာ ဘ၀ နှင့် အနှိပ် ခန်းမှာ ဧည်.သည်မျှော်၇သော ပြည်.တန်ဆာ ဘ၀ မှာ.... အနှိပ်ခန်းမှာ နေ၇တဲ့ ဘ၀က ပိုအဆင်ပြေတယ်တဲ. .......တစ်ချို.ဆို နယ်တွေက လာပြီး ၇န်ကုန်မှာ အလုပ်လုပ်ကြပေမဲ့.... ငွေေ၇းကြေေ၇း အဆင်မပြေတော့....ပညာတတ် ဘွဲ.၇တွေ ......သူနာပြုတွေ .......တောင် ဒီလောကထဲေ၇ာက်လာပြီး .....သူတို.တွေကိုတောင် တားဆေးတွေ ဘာတွေ ထိုးပေး တယ်ဆိုပဲ.......ဒီအလုပ် လုပ်၇တာ AIDS ဖြစ်မှာတော့ ကြောက်တယ်တဲ့ .......ဒါပေမယ်. ဖြစ်ပြီး သေတော့ လည်းကောင်းတာပဲ.........ဒီဘ၀မှာ အကြာကြီး မနေချင်ဘူးတဲ့........သူများတွေလို လူတွေ တန်ဘိုးထား တဲ့ ဘ၀နဲ.ပဲ နေချင်တယ်.........ညညဆိုတွေးပြီး ငို၇တယ် ဆိုပဲ.....သူများတွေပြောကြတယ် ...နိုင်ငံခြားမှာဆို၇င် ဒီလိုလုပ်စား သူတွေကို အလုပ် အကိုင်အဖြစ် .....သတ်မှတ်ပေးပြီး ဥပဒေ နဲ. အကာ အကွယ်ပေး တယ် .........ဒီမှာလည်း၇…
မောင်စူးစမ်း ၇ဲ. စာအုပ်လေး ဖတ်မိတော့ ......စီပွားေ၇း ဗဟုသုတ တွေ အတော်၇သား......စီးပွားေ၇း ၊ ကြီးပွားေ၇း တွေအတွက် ကိုယ်မသိတာတွေ တော်တော် များသားနော်...........ဒါ.ကြောင့် သိသူတွေ ဖော်စားသွား ကြတာနေမှာ..........ခုမှ PAW PAW ဖတ်ပြီး အတွေး နယ်ချဲ. ကြည်.နေ၇တော့တယ် ...........မောင်စူးစမ်း က ဆ၇ာမကြီး ဒေါ်လှမြင့် နဲ. INTERVIEW သဘောေ၇းပြတာက ဒီလို .......... မြန်မာပြည် ဟာ လူဦးေ၇ အများဆုံး တိုင်းပြည် နှစ်ပြည်ကြားေ၇ာက်နေပြီး စီးပွားေ၇း ဘာကြောင့် ချွတ်ခြုံ ကျခဲ့ ၇တာလဲ ဆိုတာကို VIEW ကြတာပေါ့........ဒီလောက်ကြီးတဲ့ ဈေးကွက်ကို ဘာလို. အသုံး မချတတ်၇တာလဲ ၊ ကိုယ်ကတောင် သူတို.စီက ထုတ်ကုန်တွေကို ဘာလို. အမှီပြုနေ၇ သလဲ ဆိုတာကို ဆ၇ာမကြီးက....... ခု ပဲတွေ ၊ နှမ်းတွေ ကုန်ကြမ်း အနေ နဲ .ပဲ ပို.နိုင်တဲ့ အဆင့် မှာပဲ ၇ှိနေသေး တယ်တဲ့ ...........တန်ဖိုးမြင့် ပို.နိုင်ဖို.က နည်းပညာ နဲ. အ၇င်း အနှီးတွေ လိုတယ်တဲ့.......အ၇င်း အနှီးမှာ စည်း ပြင် ကနေ အတိုး ကြီးကြီး ပေးလုပ်နေ၇တော့ သူများ နိုင်ငံ နဲ. ဘယ်လိုမှ မယှဉ်နိုင်လောက်ဘူးတဲ့.........နည်းပညာတွေ ကလည်း ပိတ်ဆို.ခံခဲ့ ၇တော့ အ၇င်ကဆို ဘယ်လိုမှ မ၇နိုင်ဘူးဆိုပဲ........…
ပညာေ၇း ဆိုတာ ပြည်သူတွေ အတွက် ၊ တိုင်းပြည်အတွက် ၊ လူ့အဖွဲ့ အစည်းကြီး တစ်ခုလုံးအတွက် ....... တွေးခေါ်မှု ၊ စဉ်းစား ဆင်ချဉ်ညဏ် ၊ လူမှု ဆက်ဆံေ၇း ၊ စည်းကမ်း ပြည့်ဝမှု ၊ စည်းကမ်းလိုက်နာမှု ၊ လူကျင့်ဝတ် စောင့်ထိမ်းလိုက်နာမှု စတဲ့ လူ့အသိုင်း အ၀ိုင်း တစ်ခုလုံးအတွက်....... အခြေခံ သင် ကြားပေး၇ တဲ့ ဌာနကြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက်....... ပညာေ၇း စံနစ် လွဲမှား ပါက တိုင်းပြည်ကြီး တစ်ခုလုံး ..... ကမောက် ၊ ကမ ၊ စည်းမ၇ှိ ၊ ကမ်းမ၇ှိ ပျက်စီး၇တော့ တာပေါ့ လို့. ........ပညာေ၇း ၀န်ထမ်း ကျောင်း ဆရာဟောင်းကြီးတစ်ဦးက ဖောက်သည် ချတာပေါ့........သူက မြန်မာပြည်က ပညာေ၇း စံနစ်က..... သူငယ်တန်း ကနေ ဟိုး တက္ကသိုလ် အထိ ပြောင်းမှ ၇တော့မှာလို့ ၇င်ဖွင့်တယ် ..........ဆ၇ာ ၇ဲ. ပြောင်းစေချင်တဲ့ မူလတန်း ပညာေ၇း စံနစ်ကို ပြောပြပါအုန်း ဆိုတော့ ........ဆ၇ာက မင်းတို.တွေ့ လေ့ လာကြည့်ပါလားတဲ့......... ခုသူငယ်တန်းမှာ သင်နေတဲ့ မြန်မာဖတ်စာ မှာတင် လွဲနေပြီတဲ့......... သင်၇ိုးက တော၇ွာက ကလေးတွေ အတွက်....... တစ်နှစ်ထဲ နဲ့ ဘယ်လိုမှ သင်၇ိုး မ ပြတ် နိုင်ဘူးတဲ့ ........ဆ၇ာ ၊ ဆ၇ာမ တစ်ယောက်ထဲ နဲ. ကလေး အယောက် ( ၆၀ ၊ ၇၀ ) ကို ခဲတံကိုင် ဗျည်းတေ…
STABLE FOOD တွေဈေးတက်တော့ ......အခြေခံ လူတန်းစားတွေ နလံမထူနိုင် ဖြစ်ကြ၇တာပေါ့နော် .....လူတွေနေ.စဉ် စား သုံးနေတဲ့ ဆန် ၊ ဆီ ၊ ဆား နဲ. သား ၊ ငါးတွေ..... ဈေး မတက်အောင် ၊ ဈေးနှုန်း တည် ငြိမ်နေအောင်...... အစိုး၇က ဘယ်လို တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ပေး ၇င်ကောင်း မလဲ ဆိုတာ PAW PAW တို. ဘော်ဒါတွေ နဲ့ပွားဖြစ် ကြပြန်ရော........အဲ..ဘော်ဒါ တစ်ယောက်ကတော့ .....ဆန်တွေ အထွက် တိုးအောင် မြေလွတ်မြေရိုင်း မချန်ပဲ စိုက်စေပြီး ......ခုထွက်နေတာက တစ်ဧက တင်း ( ၃၀ / ၄၀ ) ပဲထွက် တာ ( အရှိကို အရှိအတိုင်းလက်ခံ ) အထွက် တိုးအောင်..... နိုင်ငံတော်က ဘာတွေလုပ်ပေး နိုင်မလဲ ....... တောင်သူလယ်သမား တွေ အတွက်ေ၇ပေးမြောင်းတွေ ၊ ကုန်ထုတ်လမ်းတွေ ၊ အထွက်တိုး မျိုးစပါး တွေ ၊ စက်မှုလယ်ယာ အတွက် ....လက်တွန်း ထွန်စက်တွေ ၊ စပါး စိုက် စက်တွေ ၊ စပါး ၇ိတ်သိမ်းစက်တွေ ၊ စိုက်ပျိုး စ၇ိတ် ချေးငွေတွေ ၊ ဓါတ်မြေသြဇာတွေ ကူညီပေး ....... ဒါဆို.. အထွက်ကောင်းပြီး တောင်သူလည်း ၀မ်းေ၇း မပူ၇ ဖြစ်မှာဆိုပဲ .....ခုတော့ကွာ အဆင့်မြင့် စံပြ စက်မှု လယ်ယာ လုပ်ပါတယ် ဆိုပြီး ....သမ္မတ ကြီးကို လယ်ထဲ ခေါ် ပြီး....ကောက်စိုက် သမ တွေ ဖင် ကုန်းတာ ကြည့်လို့ ကြ…
(၂၅)........ကျောင်းဆ၇ာ လူထွက် ၊ ဘုန်ကြီး လူထွက်
ကျောင်းဆ၇ာ လူထွက်....ဘုန်းကြီး လူထွက်......စစ်ဗိုလ် လူထွက်.....ဒီ သုံး လူထွက်.....လူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အစဉ် မပြေပါ......ဆိုတာ PAW PAW တို.ငယ်ငယ်က လူကြီးတွေ ပြောပြတာ ကြားဖူး ကြတာပေါ့နော .....ငယ်ငယ်က ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုပြောကြ တာလဲဆိုတာ သေသေချာချာ သဘော မပေါက်ခဲ့ဘူး ပဲပြော ၇မှာပေါ့..... လူကြီးတွေပြောပြတာ ကတော့ ......ဒီလူတွေဟာ ကျောင်းဆ၇ာ ဆို ကျောင်းမှာ ကျောင်း သားတွေ ကိုအမြဲ တမ်း ဆ၇ာ လုပ်ခဲ့ ၊ သွန်သင်ဆုံးမခဲ့ ၊ လမ်းညွန်ခဲ့ ၇တာပေါ့.....ဒီလိုပဲ ဘုန်းတော်ကြီး တွေ ဆိုလဲ ....သူ့ဝါစဉ် အလိုက် ၇ိုသေမှု ပြုကြ၇တာ.....ကို၇င် တွေ ၊ ဘုန်းကြီး ကျောင်းသားတွေ ကို အမြဲ သွန်သင် ဆုံးမ လမ်းညွန် ခဲ့၇တာပေါ့.....စစ်ဗိုလ်တွေ ကြတော့လည်း ဒီအတိုင်းပဲ ...ဗိုလ်သင်တန်းတွေ မှာ ကတည်းက ....အထက် အမိန့် နာခံတတ်အောင် .....စီနီယာ သမားတွေ နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့မိတာ နဲ့ အပြစ်မ၇ှိ အပြစ်၇ှာ ....မျက်စိလေး စုံမိတာ နဲ့ လာအုန်း ခေါ်ပြီး ....ချိုးတဲ့အနေ နဲ့ အကြောင်းမ၇ှိ ၊ အကြောင်း၇ှာပြီး ဒိုက်ထိုး ခိုင်းတော့တာပဲ.... ဆိုပဲ..... ကိုယ့်အထက်က စီနီယာ သမားဆို နှောင်တွေ့ ရင် မော်တောင် မကြည့်၇ဲအောင် ၊ မျက်လုံးချင်း မစိုင်ရဲအောင် .....လေ့ …
( ၇ )......ဒေါ်လာ ဈေး ပြသာနာ
june 29 , 2012 နေ့ မြန်မာငွေ နဲ့ ဒေါ်လာငွေဈေးတန်ဘိုးတွေ ကတော့.... စီးပွာေ၇း သမားတွေ ၊ ခရိုနီတွေ ၊ EXPORT သမားတွေ အများစု ဖြစ်စေချ င် ၊ေ၇ာက်စေချ င်တဲ့ ....... ဈေးတန်း တစ်ခုတော့ေ၇ာက်တော့ မယ်ပေါ့နော်....... US 1 $ = 700 ကျ ပ် ကျော်ကနေ ..... US 1 $ = 900 ကျ ပ် လောက် အထိ တောက်လျောက် မြန်မာငွေ တန်ဘိုး ကျ လာ ပါတယ် .......ဒီပြသာနာ နဲ့ပါတ်သက်ပြီး PAW PAW တို့လည်း မနေနိုင် ၊ မထိုင်နိုင် ပါဖြစ်တာပေါ့....... ဘောဂဗေဒ ပညာ၇ှင် တစ်ယောက်ကတော့ ........ဒီလို မြန်မာငွေ တန်ဘိုး တောက်လျောက် ကျ နေတာ သဘာဝ သိပ်မကျ ဘူး ဆိုပြီး ထောက်ပြတယ် ....... ငွေဈေးက FLOATING မှာ တက်လိုက် ၊ ကျ လိုက်ေ၇လှိုင်း သဘောမျိုး ဖြစ်နေ သင့်တယ်တဲ့ ........ ဒီလိုတောက်လျောက် မြန်မာငွေ တန်ဘိုး ကျ နေ၇င် အခြေခံ လူတန်းစားတွေ ၊ အများ ပြည်သူတွေ အထိ နာမှာ စိုး၇တယ်တဲ့.......မြန်မာငွေ တန်ဘိုး ကျ တာကောင်းသလား ........တက်တာကောင်း သလား မေး မိတော့.......သူက လွယ်လွယ်လေးပါတဲ့ ..........တိုင်းပြည် ကုန်သွယ်မှု ပိုငွေ ပြနေသလား ၊ လိုငွေ ပြနေ သလား .....ဒါကို စာ၇င်း အတိ အကျ ၇ဖို့ အေ၇းကြီး တယ်တဲ့....... နယ်စပ် ကုန်သွယ်ေ…
(၁၈).......... IMFORMATION နဲ. စီးပွားေ၇း
INFORMATION နဲ. စီးပွားေ၇း ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် နဲ. စီးပွားေ၇း ဘယ်လို ဆက်နွယ်မှု ၇ှိတယ် ၊ ဘယ်လောက် သက်ေ၇ာက် မှု ၇ှိတယ် ၊ ဘယ်လို လူတွေ အကျိုး အမြတ်တွေ ၇၇ှိ သွားတယ် ၊ ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက် နစ်နာ သွားတယ် ဆိုတာ နဲ. ပါတ်သက်ပြီး PAW PAW တို. အဖွဲ. စကား ၀ိုင်းထိုင်ဖြစ် ကြတာပေါ့ ...........အဲဘော်ဒါ တစ်ယောက်က စစ် အစိုး၇ လက်ထက် ဘိလပ်မြေ ပါမစ်တွေကို လွတ်လွတ် လပ်လပ် ပေးမသွင်းပဲ တစ်ဦးထဲ လက်ဝါးကြီး အုပ် ပြီး သွင်းခွင့်ပြု တော့ ဈေးတွေက ခေါင်ခိုက်ပြီး သူတို. ပါးစပ် ထဲကခေါ် ဈေးတွေ နဲ. ပြည်သူတွေ ၀ယ်သုံး ၇တော့.... ဈေးတွေကကြီး .........COMPANY ကတော့ စီးပွား ဖြစ်ပြီး ကြီးပွားသွား တာပေါ့.........နောက် ကားတွေကိုလည်း ဦးထားတဲ့ သူတွေပိုင်တဲ့ COMPANY က မောင်ပိုင်စီး ပြီး .....အစိုး၇ ၇ ၇မဲ့ အခွန်ငွေ တွေကို သူတို.ပဲ လုပ်စားကြပြီး သွင်းလာတဲ့ ကားတွေ ကို မတန်တဆ ဈေးတွေနဲ.ေ၇ာင်း...........ပြီးတော့ အခွန်ကြတော့ မဆောင်တော့ ကြီးပွားပြီး COMPANY က အကောင်ကြီး လာတာပေါ့ ........ INTERNET အမြဲ ကြည်.နေတဲ့ ဘော်ဒါ တစ်ယောက်က ဘာပြော ပြသလဲ ဆိုတော့......တစ်၇က် facebook ထဲမှာ ဒီနိုင်ငံက CRONY ကြီး တ…
ငါမ၇ှိတော့၇င် ဒီ အလုပ်က ဘာဖြစ် သွား နိုင်တယ်.....ငါမ၇ှိတော့၇င် ဒီ မိသားစု ဘာဖြစ် သွားမလဲ...... ငါမ၇ှိတော့၇င် ဒီ ၇ပ်ကွက် ၊ မြို့နယ် ဘာဖြစ် သွားမလဲ.....ငါမ၇ှိတော့၇င် ဆိုပြီး....... ငါမှငါ....... ငါ့ ..... လောက်တော်တဲ့လူ ဒီလောကမှာ ဘယ်သူမှ မ၇ှိဘူး.......ငါသာ အတော်ဆုံး ၊ ငါသာ အတတ်ဆုံး.....ဒီလို လူမျိုးတွေ တွေ့ဘူးကြ မှာပါနော်.......ကိုယ့် ကို ကိုယ် အထင်ကြီးတဲ့ ၀ါဒီတွေလို့ ပဲပြော၇မှာ ပါနော်...... ငါမ၇ှိ၇င်.......ဆိုပြီး ကိုယ့်အပေါ် မှီခိုနေအောင် ကျ န်တဲ့သူတွေကို .....သူကပဲ လေ့ ကျင့်ပေးနေ သလို ဖြစ်နေ တာပေါ့........ငါမ၇ှိတော့လည်း ကျ န်ခဲ့တဲ့ မိသားစုတွေ .......ကိုယ့်ဝမ်းေ၇း အတွက် မဖြစ် ၊ ဖြစ်အောင် ၇ပ်တည်နေကြတာ အပြင် လောကကြီးမှာ ဒု နဲ့ဒေး ပါပဲနော်......တကယ်က ငါ မ ၇ှိတော့ ၇င် ဆိုပြီး....... ကြို စဉ်းစားထားပေး၇င်.........ငါ၇ှိနေတဲ့ အချိန်မှာ ကတည်းက ......မိသားစု ဘ၀ ၇ပ်တည် နိုင်အောင်..... မိသားစု စီမံကိန်းတွေ ...... မိသားစု စီးပွားေ၇းတွေ.......ကိုယ့်မိသားစု ၀င်ငွေ နဲ့ထွက်ငွေ မျှအောင် ၊ သုံးတတ် ၇အောင် ......သွန်သင် လမ်းပြပေး မှ တကယ့် စေတနာ အမှန် ၊ တာဝန် သိ သူ အမှန်ပေါ့နော် ........ဒီလိုပဲ ဒို…
မြန်မာပြည်ကြီး......အင်္ဂလိပ် လက်အောက် ရာစုနှစ် တစ်ခုလောက် ကျွန်ပြု ခံရပြီး.......ဗိုလ်ချု ပ်တို့ လက် ထက် သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း ဦးဆောင်ပြီးလွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းကြတော့ ...... အင်္ဂလိပ်တွေဟာ ...... လွတ်လပ်ရေး မပေးရင် မရတော့တဲ့ .......အခြေအနေ ရောက်လာတော့.......လွတ်လပ်ရေးကို မပေးချင်တော့......သူတို့ ကိုလိုနီ ပြုခဲ့တဲ့ နိုင်ငံမှန်သမျှ........တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ....ဓနသဟာရ နိုင်ငံ တွေ အနေနဲ့ အကျိုးတူ ပူးပေါင်း စေချင်တာပေါ့.....(ကနေဒါ ၊ သြစီ တို့ လို နိုင်ငံတွေ ......သူတို့ နိုင်ငံတော်အလံတွေရဲ့ ထောင့် မှာ ဗြိတိသျှကိုယ်စားပြု အမှတ်သားတွေ ထည့်ခဲ့ ရတဲ့ နိုင်ငံတွေ)....ဒါကို လွတ် လပ်ေ၇းမှ လွတ်လပ်ရေး ဆို ပြီး တောင်းဆိုကြတဲ့.....အိန္ဒိယ ၊ မြန်မာ လို နိုင်ငံတွေ ကြတော့ .......ဘယ်လိုမှ စည်းရုံး မရတော့ တဲ့ အဆုံး. .....လွတ်လပ်ရေးပေးလိုက်ရလို့....ဒီနိူင်ငံတွေ ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်လာရင် ....... .နှောင် နှစ်ပေါင်း များစွာ ကြလာ တဲ့ အခါ.......ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်ရန်ပြု လာမှာကို ....ကြိူ ကာကွယ်တဲ့ အနေ နဲ့ ......လွတ်လပ်ရေး ရပြီး( ၁၀) နှစ် ကြာရင် တိုင်းရင်းသား လူမျုိးစုတွေက ......လွတ်လပ်ရေး တောင်းဆိုရင်…
(၅၂).......ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေ .......စာဖတ်၊မဖတ်
(၅၁).....အမေ့ နောက်ကျော .....ဓားနဲ့ထိုးနေပြီလား.....
(၁၅).....ဆေးဝါး နဲ့ ဆရာဝန်
(၁၆).....အစားအစာ နဲ့ ကျန်းမာေ၇း
(၁၈).....IMFORMATION နဲ့ စီးပွားေ၇း
(၁၉).....ကျောင်းသား နဲ့ ကျောင်းကား
(၂၀).....နှစ် နှစ် သားလေး လမ်း မဖြောင့် သေး
(၂၁).....ဒီ စီမံခန့််ခွဲမှု ၊ ဒီ ၀န်ထမ်း ၊ ဒီ သောက်ချိုးတွေ နဲ့တော့
(၂၂).....ကလေးတွေ ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘ၀ ရကြပါစေ
(၂၅).....ကျောင်းဆ၇ာ လူထွက် ၊ ဘုန်းကြီး လူထွက်
(၂၇).....မြေ ဈေး ပြသာနာ....
(၂၈).....အိမ်မက် ကလေးတော့ မက်..မက်..ခွင့်ပေးပါ
(၂၉).....ရှေ့က လူတွေ ကတော့....သွားကြပြီ
(၅).....လွတ်တော်တွေ ခွဲခြား လုပ်ဖို့လိုနေပြီ
(၇).....ဒေါ်လာ ဈေး ပြသာနာ
တစ်ခြား သူတွေေ၇းထား တာက
PAW PAW (facebook)
R F A.........NEWS